Madaxweyne Xasan oo lakulmay Madaxweyne ku xigeenka Burundi – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 March 16 Madaxweyne Xasan oo lakulmay Madaxweyne ku xigeenka Burundi
Madaxweyne Xasan oo lakulmay Madaxweyne ku xigeenka Burundi
Posted on March 16, 2016 by Mustafa Awale | 0 Comments
Muqdisho, 16 March 2016: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay Madaxweyne Ku Xigeenka 1-aad ee Jamhuuriyadda Burundi, Gaston Sindimwo oo maanta booqasho laba maalmood qaadaneysa ku yimid dalka.
Madaxweynaha ayaa ugu horeyn ka mahad celiyay doorka naf-hurnimo ee dowladda Burundi ay ka qaadaneyso sidii nabad waarta Soomaaliya loogu soo dabaali lahaa, isagoo dhanka kalena xusay in labada dal ay dhinacyo badan iska kaashan karaan.
Shirkaasi ayaa labada dhinac ay isku afgarteen xoojinta iskaashiga labada dal.
Xubno lagu doortay maanta magaalada Muqdisho iyo Jowhar akhriso magacyada December 4, 2016
Dowlada Soomaaliya Oo Shaacisay In Ay Dishay Madaxii Al-Shabaab ee G/ Banaadir August 1, 2017
Ciidamada Xasilinta ee Baladweyne ku sugan oo bilaabay howlgalo lagu baarayo Dad dil geystay. September 8, 2017
Xisbiga Kulan oo ka tacsiyeeyay geerida Marxuum Cabdi Xaaji Goobdoon rug cadaagii January 26, 2016
US Secret Service helps the world’s most corrupt country to identify fake dollars March 15, 2017